Wararka Maanta: Isniin, Dec 3 , 2012-Wafdi isugu jiray Wasiirro iyo Saraakiil Ciidan oo maanta lagu weeraray inta u dhexeysa Degmada Marko iyo Shalaanbood
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, Cabdulqaadir Maxamed Siidii ayaa xusay in weerarka uu ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Shalaanbood iyo degmada Marko, wuxuuna xaqiijiyay in loo sheegay in afar askari oo ilaalo u ahayd taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ay si xun ugu dhaawacmeen qarax lala eegtay gaari ay wateen.
"Mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ilaalada taliyaha booliiska Soomaaliya, Shariif Sheekhunaa Maye ayaa markii hore qarax lala eegtay, waxaana ku dhaawacmay halis ah uu kasoo gaaray afar ka mid ah askartii saarnaa, markaas kaddibna waxaa xigay dagaal socday muddo daqiiqado ah," ayuu yiri Siidii.
Lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxa lala beegasday gaariga ay wateen ciidamada dowladda iyo dagaalkii xigay, balse saraakiil u hadlay dowladda ayaa sheegay in khasaare ay ku gaarsiiyeen xoogaggii Al-shabaab ee weerarka soo qaaday.
Sidoo kale, guddoomiyaha Shabeellada Hoose wuxuu sheegay inuu jiray weerar kale oo lagu qaaday wafdigan shalay oo ay halkaas tageen, wuxuuna xusay inay dib u soo noolaadeen xoogaggii Al-shabaab ee laga saaray degmada Marko iyo kuwa ku dhow-dhow.
Al-shabaab ayaan weli ka hadlin dagaalka, waxaana dagaalkan uu noqonayaa midkii labaad oo ay ku qaadaan wafdigan ka socday dowladda oo ay ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga, wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta, taliyaha booliiska Soomaaliya iyo saraakiil kale.
Wafdigan la weeraray oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay u tageen degmada Marko sidii loo adkeyn lahaa ammaanka degmooyinka ay dowladdu kaga sugan tahay gobolkaas, inkastoo laba jeerar la weeraray.